Warshada Shiinaha Shiinaha waxay siisaa nadiifinta ugu sareysa Methylamine hydrochloride / Methylamine HCL CAS 593-51-1 warshad iyo soosaarayaasha | Guanlang
Warshada Shiinaha waxay siisaa nadiifinta ugu sareysa Methylamine hydrochloride / Methylamine HCL CAS 593-51-1
231-233 ° C (shiday)
Budada kareem aan midab lahayn
225-230 ° C15 mm Hg (shidan)
0.8306 (qiyaas adag)
25kg / durbaan / boorso
3 maalmood gudahood
Kaydinta Methylamine hydrochloride:
Heerkul hoose, xiran, hawo qaadasho, qalalan bakhaarka; Ku kaydi si gooni ah oksaydhyada iyo asiidhyada adag.
Macluumaadka alaabta Methylamine hydrochloride:
Methylamine hydrochloride, muuqaalka waa budada aan kareemka lahayn.
Methlylamine hcl waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarno. Xirmada methylamine hydrochloride waa 25kg / durbaanka ama 25kg / bag.Waxaan sidoo kale ku soo koobi karnaa macaamiisha'ququest '.
Ha ka walwalin bixinta methylamine hydrochloride, waxaan leenahay khibrad dhoofinta hodanka ah ee methylamine hydrochloride, waxaan gurantee karnaa 100% gaadiidka.Waxaan leenahay hab xirfad iyo badbaado u leh maraakiibta.Waxaan kula talin karnaa macaamiisha xalka ugu haboon ee gaadiidka.
Tayada badeecadeenu waa mid deggan oo la isku halleyn karo, nadiifnimadeennu waxay hodan ka noqon kartaa in ka badan 99% .Oo waxaan la yeelannay xiriir saaxiibtinnimo iyo xasilloon oo ganacsi oo lala yeesho shirkado badan oo caan ah gudaha iyo dibedda. Dhoofintayadu waxay gaari kartaa boqollaal tan sanadkii. badeecada waxaa loo iibiyaa si aad u wanaagsan suuqa Eurapean iyo South America sida Mexico, Colombia, Honduras, Guatemala, England, Poland, Italy, Germany, Czechoslovakia, Netherland, Norwy iyo wixii la mid ah. Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto waxaanan ku siin doonaa dalabka ugu fiican.Sidoo kale waxaan qiimo dhimis ballaaran u sameyneynaa macaamiisha cusub.
Waxaan sidoo kale haynaa badeecooyin kale oo badan oo lagula taliyay: Et -Methylpropiophenone, Valerophenone Dilthiazem hydrochloride iyo wixii la mid ah. Wax soo saarkani waa kuwo caan ka ah dalal badan oo yurub ah.Haddii aad ku dhex jirto, fadlan si xor ah ula soo xiriir annaga.Waxaan ku siin doonnaa adeeg xirfad leh.Choose Hebei Guanlang B iotechnology Co., Ltd, kama qoomami doontid.Hope ku abuuri ganacsi waqti dheer ah Adiga oo horay u sii wada.
Hore: Warshad sameysay qolka iibka kulul ee jeermiska - Daawooyinka caafimaadka xoolaha Tetramisole hydrochloride cas 5086-74-8 - Guanlang
Xiga: Daawooyinka xoolaha Tetramisole hydrochloride cas 5086-74-8
Methylamine Iyo Hydrochloric Acid
Daawada Methylamine Hcl